Rikoooo.com - MALAZA FOMBA GPS Navigation - Nohavaozina
GPS Navigation dia TSY MANDRAKIZAY
Lahatsoratra tsy mbola novakiana • Lahatsoratra 20
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 02 Apr 2017, 18:34
Hitako fa matetika no manao an'io matetika io eto tato ho ato. Tsy mbola nanao toy izany talohan'ny 2017 ......
Azonao jerena ny lalana MANARAKA INDRINDRA hoentina aho, avy eo avaratra fotsiny, Ny lalako mankany DFW, ary avy eo ny làlan'ny CURRENT mankany LFRG, avaratry an'izany.
Very aho fa maninona no manao an'izany. Indraindray dia manidina tsara ny lalana miverimberina FIVORIANA vanim-potoana, ary avy eo misy ny fotoana toy ny NOPE! TSY manao an'izany .....
Ny làlako tao amin'ny DFW dia akaiky lavorary. havanana amin'ny teboka, ary ny tahan'ny miakatra -.37 ft / sec amin'ny touchdown (mandrosoa .... mitsiriritra lol)
GPS Navigation dia WAY matihanina
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 02 Apr 2017, 20:28
Eny, nanapaka zavatra ianao.
Nisy tihidy ve ianao momba ny làlana, aorian'izay? Nataoko ianao,FSX hanakorontana ny drafi-sidina iray manontolo, ary matetika dia mamerina ny fiaramanidina amin'ny lalana voalohany. Na, mifamadiho amin'ny maody HDG fa tsy GPS / FMC. Izay no antony hijereko sy hizaha indroa ny zotra hahazoana antoka fa tsy misy lesoka na fihodinana adala na toa azy.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 02 Apr 2017, 20:40
lol nope. Tsy miova zavatra aho raha tsy voatery mifindra avy amin'ny VFR mankany IFR noho ny toerana itodiana IFR ary amin'io fotoana io dia efa nifandray tamin'ny tilikambo aho.
Tsy mipetraka aho ary mijery FSX nandritra ireo sidina lava be ireo. Manao zavatra hafa aho, toy ny lalao World of Warships (izay ataoko tsara izao izao lol)
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 02 Apr 2017, 21:05
... Nisy sidina vitsivitsy '' ambonin'ny dobo '' vitsivitsy aho, raha ny tena izy dia KPHX-LYBE iray lava be ary nahitana ilay fiaramanidina, teo amin'ny toerana tokony hisy azy. Tsy vitako ny nanao ny sidina iray manontolo indray mandeha, ka nataoko tamin'ny faritra vitsivitsy. Voatahiry amin'ny fotoana iray ary mitohy rehefa manararaotra fotoana kely aho. Tahaka ny nolazaiko, dia teo no ho eo.
Azo atao ve ny mandefa ahy ny drafi-piaramanidina? (FB na mailaka) Hiezaka ny hanao izany aho. Iza no fiaramanidina ampiasainao amin'io?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 02 Apr 2017, 21:19
amin'ny ankapobeny dia tsy resaka ......
Izaho dia manao KDFW - LFRG ao amin'ny 747-400LCF noho ny maha-akaiky ny sakany, fomba iray mora ((rehefa mahazo làlan-kianja 12 lol), ary vokatr'izany, dia mahazo vola be ho an'ny VA miaraka amin'ity sidina ity aho .
Efa napetrako ny rakitra zip miaraka amin'ireo drafitra 3 ampiasaiko.
KDFW - LFRG VFR mankany amin'ny fihazakazahana 12 & 30, ary ny IFR mankany amin'ny fihazakazahana 30
Ny firaiketam-po KDFW-LFRG.zip tsy misy intsony
(2.42 KiB) Nalaina intelo
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 02 Apr 2017, 21:35
OK. Hataoko somary hafa kely ilay izy, miaraka amin'ny normal 747ERF.
Somary hafahafa ho ahy ny nanao sidina toy izao ao amin'ny VFR ... angamba ho any no misy ny fahadisoana ... Na izany aza, hiezaka aho.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 02 Apr 2017, 21:54
99.999% ny sidiko dia VFR sy KDFW - LFRG no hany lalana izorako ity olana ity. Tsy tiako ny IFR. Ny tiako holazaina dia inona ny hevitry ny fanaovana IFR amin'ny toetr'andro VFR, rehefa esorinao fotsiny izany rehefa avy naka aina?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 02 Apr 2017, 22:09
99.999% ny sidiko dia IFR, miaraka amin'ny ATC, na dia manelingelina aza any amin'ny helo, nefa manao izay tratry ny heriko aho mba hitazomana azy ho araka ny zava-misy araka izay azo atao.
Hatramin'izao aloha dia mandeha tsara ny fiaramanidina.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 02 Apr 2017, 22:29
Hanao izany aho .... saingy tiako ny hatory Hataoko hampiakatra ny ora ianao
Fa maninona no misidina lavitra be aho? tsara ho an'ny iray .... Ity no nataoko hatreto tamin'ny volana aprily.
Faharoa, izaho irery no manidina amin'izao fotoana izao ho an'ny VA, ary amin'izao fotoana izao ny fandaniantsika dia $ 961,250 amin'ny fandoavam-bola mandritra ny iray volana ho an'ny vorona pax 2 (samy 777-200LR), ary $ 1,258,334 isam-bolana ho an'ny mpitatitra entana 2 (747 -800F).
Anjaranao ny manome antoka fa mitondra ampy isam-bolana isika mba handrakofana izany ary handraisanay vola ny vola ilaina amin'izany.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 02 Apr 2017, 22:31
Vao nanao mihoatra ny 300K nm aho tamin'iny volana lasa iny, ary fantatr Andriamanitra mahalala hoe firy no afaka lol
Mety tsy hihetsika ho anao izany. Tsy nataoko ho ahy foana izany. Tsotra tanteraka izany